တော်လှန်‌ရေးကြီး ပြီးသွား တဲ့ အခါ မြန်မာ့ နွေဦးတော် လှန်ရေး သစ်တောလေး – GaMone Media
Homepage / Local News / တော်လှန်‌ရေးကြီး ပြီးသွား တဲ့ အခါ မြန်မာ့ နွေဦးတော် လှန်ရေး သစ်တောလေး
တော်လှန်‌ရေးကြီး ပြီးသွား တဲ့ အခါ မြန်မာ့ နွေဦးတော် လှန်ရေး သစ်တောလေး
တော်လှန်ရေးကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ…. သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာလေး တစ်ခု အေးဆေး သာယာလှ ပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ခြံကျယ်ကျယ် လေးမှာ ကျ ဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက် အပင်လေးတစ်ပင်စီစိုက်မယ်
သစ်ပင်လေးတွေအောက်မှာ သူတို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနာမည်လေးတွေနဲ့အတူ ကမ္မည်းထိုးမယ် သူတို့ရဲ့ Biographyလေး အကျဉ်းချုပ်ကိုရေး ထားပေးမယ်
သူတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း မိသားစု တွေ အလွမ်းပြေ သစ်ပင် မှာ စာရေးပြီး ကပ်ထား လို့ရအောင် stickerလေး တွေ ထားပေး မယ် Community forestပုံစံလေး Developဖြစ်အောင် သေသေချာချာလေးလုပ်နိုင်ရင် ကမ္ဘာ့ရာဇဝင်တင်တဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး သစ်တော လေးအဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာ
Revolution Forest လို့ နာမည်ပေးမယ် တောအုပ်လေးရဲ့ အဝင်ဝမှာ လက်၃ချောင်းထောင်ထားတဲ့ ရုပ်တုကြီးထားထားမယ် ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေရဲ့ရုပ်ထုလည်းထားမယ်
Uniformနဲ့ လူငယ်လေး တွေရဲ့ ရုပ်ထုမှာ မပါ မဖြစ်ကတော့ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု ၊အင်ဂျင်နီယာ၊ Banker၊ ကျောင်း ဆရာဆရာမ တွေ မီးရ ထားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ Generation Zလေးတွေပါပဲ…. Forest တဝိုက်မှာ …ရေပန်းလေးတွေထည့်မယ်
ရေကန်ကြီးတစ်ကန် သို့မဟုတ် စမ်းချောင်းလေးတော့ ထည့်စေချင်တယ် ရေကန် သို့မဟုတ် စမ်းချောင်းရဲ့အပေါ်မှာ တော့ လိပ်ခုံးတံတား လေး တစ်စီးဆောက်ချင်တယ်ကြာပန်းလေးတွေစိုက်မယ် လူသွားလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ရောင်စုံပန်းလေး တွေ အနံ့မွှေးတဲ့ပန်းလေး တွေ ဝေနေအောင် စိုက်မယ်
ပြခန်းလေးတစ်ခု ခမ်းခမ်းနားနား လုပ်ပြီး တော်လှန်ရေးတုန်းက ရင်ထဲထိခဲ့ရတဲ့ ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရ ပုံလေးတွေ ဓာတ်ပုံလက်ရာပန်း ချီလက်ရာ ကဗျာစာပေ Video နွေဦးတော်လှန်ရေးသီချင်းတွေ စသဖြင့် Englishလိုရော မြန်မာလိုရော စနစ်တကျစုစည်းပြီး ခင်းကျင်း ပြ စေချင်တယ်
Revolution Forestထဲမှာ မောလာရင် နားဖို့နေရာ စားဖို့နေရာလေးတွေလည်း ဖန်တီးပေး ချင်တယ် အနားယူမယ့်နေရာမှာတော့ သံပုံးတီး နေတဲ့ မိသားစုပုံလေးကို ရုပ်တုလေးလုပ်ပြီး ထည့်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့…စားသောက်ဆိုင်လေးတွေ Coffee ဆိုင်လေး တွေ ဖြစ်ဖြစ် ဒေသ ထွက် ကုန်တွေ အမှတ်တရလက်ဆောင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးပြီး ကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည် တွေရဲ့မိသားစု ဝင် တွေကို အလုပ်ခန့်ပြီး ဝင်ငွေလေးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ အတိုင်း ထက်အလွန်ပေါ့
ဝင်ကြေးလေးကို သာမန်လူတန်းစားကအစ ဝင်လို့နိုင်အောင် ၁၅၀၀ လောက်ပဲ သတ်မှတ်ပြီး ရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ ငွေပဒေသာ ပင်စိုက်ထူ အာဇာနည်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးတာမျိုး ပိုတဲ့ငွေနဲ့ သစ်တောကို အမြဲစိမ်းစိုနေဖို့ ထိန်းသိမ်း ခ သဘော မျိုး လုပ် ထားလိုက်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ
Travels and Tours company တွေနဲ့ ချိတ် ဆက်ပြီး နိုင်ငံခြားသား တွေ လာ အောင် National Trademark အဖြစ် ဖန်တီး နိုင်ခဲ့ရင်….. Tourist attractionအတွက် နေရာတစ်နေရာလည်းရ ကျဆုံးသူတွေအတွက် အမှတ်တရနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေလည်းရ ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုကိုလည်း ထောက်ပံ့ပြီးသားဖြစ်သလို တစ်ချိန်ကျရင် ဖေဖေတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလိုတော်လှန်ခဲ့တာလေဆိုပြီး ကလေး တွေကိုပြဖို့ ပြယုဂ်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့…
စိတ်ကူးလေးနဲ့တင် နွေဦးတော်လှန်ရေး သစ်တောလေးဟာ အသက်ဝင် လို့နေလေရဲ့
Previous post MISS GRAND MYANMAR 2020 အလှမယ် ဟန်လေး ရဲ့ ခက်ခဲ လွန်း တဲ့ ဘဝ အကြောင်း
Next post ခြောက်ထောင် နဲ့ ရမလား ခြောက်ထောင် နဲ့ ရရင် ယူမယ် ဆို တဲ့ မိန်းကလေး ရေ ကျေးဇူးပါ